लेजर : फेसन कि बाध्यता ? | Ratopati
लेजर : फेसन कि बाध्यता ?
personटुना भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeअसार ८, २०७६ chat_bubble_outline3
हरेक मानिसमा सुन्दर देखिने चाहना हुन्छ । कुनै कारण सौन्दर्यता ह्रास आयो भने मानिस अनेकन उपायको खोजी गर्न थाल्छन् । त्यसैले पनि सुन्दरतालाई आत्मविश्वाससँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।
प्रविधिको विकाससँगै विभिन्न समस्याको समाधान सजिलै हुन थालेको छ । यहाँ के भन्न खोजिएको भ यदि सुन्दरता विगार्ने गरी केही समस्या आएमा त्यसको सजिलै उपचार सम्भाव छ ।
सुन्दरता निखार्ने अचुक उपायको रूपमा विकास भएको एक प्रविधि हो लेजर । लेजर छाला प्रविधिबाट पुनरुत्थान गर्नेदेखि दाग, अनावश्यक रौँ, चाउरीपन, चाया, पोतो, पोलेको दाग, कोठी, खत, मखिया, चोटपटक खत लगायत छालामा देखिने कुनै पनि समस्यालाई अस्थायी र स्थायी रूपमा हटाउन सकिन्छ ।
लेजरको प्रयोग विभिन्न समस्यामा प्रयोग हुन्छ । जस्तो; मेडिकल क्षेत्रमा शल्यक्रिया, कुनै रोगको उपचार गर्न तथा शारीरिक सुन्दरताका लागि ।
लेजर जति उपयोगी प्रविधि हो उति नै मानिसमा कम जानकारी रहेको देखिन्छ । कतिले लेजरलाई फेसनको रूपमा मात्रै लिने गरेका छन् । तर लेजर फेसनभन्दा बढी बाध्यता हो । लेजरले छालालाई सुन्दर बनाउने मात्र होइन कि मानिसका आत्मविश्वास बढाउन पनि मद्दत गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले लेजरबारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
वास्तवमा लेजर के हो ? लेजर किन गर्ने र लेजर गरेपछिको अवस्थाबारे धुलिखेल अस्पतालका वरिष्ठ छालारोग विशेषज्ञ प्रा.डा. धर्मेन्द्र कर्ण ।
के हो लेजर ?
लेजर (LASER_ अथवा एल.ए.एस.ई.आर. ।
एल : लाइट (प्रकाश)
ए : एम्प्लिफिकेसन(प्रवद्र्धन)
एस : स्टिमुलेटेड (उत्तेजित)
इ : इमिसन (छर्र्नु)
आर : रेडियसन (विकिरण)
लेजर प्रकाश उत्सर्जन गर्ने पद्धति एक हो । लेजरको विकास सन् १९६० मा भएको थियो । नेपालमा यो प्रविधि सन् २००४ तिर मात्रै भित्रिएको हो ।
यसले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको अप्टिकल एम्प्लिफिकेसन माध्यमबाट प्रकाश उत्सर्जन गर्छ । लेजरको प्रकाश दिशात्मक हुन्छ र यो मसिनो रेखा बनाएर निश्चित दिशामा केन्द्रित हुन्छ । यसले गर्दा यसको असर परसम्म पर्छ ।
लेजरबाट उत्सर्जन हुने प्रकाशको असरले काम गरेको हुन्छ । हाम्रा वातावरणमा भएका बत्ति वा प्रकाशमा धेरै तरङ्ग मिश्रण भएको हुन्छ तर लेजरमा ती प्रकाशका तरङ्गलाई एकत्रित गरिएको हुन्छ ।
अझ सामान्य रूपमा बुझ्दा लेजर हाम्रो वातावरणमा भएका प्रकाशलाई एकत्रित गरी त्यसमा थप पावर बढाइदिँदा आउने प्रकाश हो । अथवा छरिएर रहेका प्रकाशलाई एकत्रित पार्दा बनेको किरण नै लेजर हो
जस्तो; कन्भर्जेन्स लाइटलाई फोकप पोइन्टमा लैजाँदा उक्त लाइट एकत्रित भएर हिट प्रोड्युस गरिदिन्छ, त्यही नै हो लेजर । कुनै पनि लाइटहरू जुन छरिएर रहेका हुन्छन् ती लाइट फरक दिशामा फरक फरक वेब लेन्थमा हुन्छन् र त्यसको गति पनि फरक फरक हुन्छ । तर लेजर प्रविधिले यी छरिएका लाइटलाई एकत्रित गरेर एउटै वेब लेन्थमा एउटै भेलोसिटीमा प्रसारण गर्छ । यसलाई इलेक्ट्रिक म्याग्नेटिक लाइट पनि भनिन्छ ।
लेजरले के काम गर्छ ?
हाम्रो छालामा हुने कुनै पनि समस्या जस्तै; पोलेको दाग, जन्मजात दाग, चोटपटकका दाग, चाया, डण्डिफोरको दाग, ट्याटु, अनावश्यक रौँ, चाउरीलगायतका कुनै पनि समस्याको स्थायी समाधान गर्ने काम लेजरले गर्छ ।
लेजरबाट आँखी भौँ, काँखी मुनिको रौँ, यौनाङ्गका रौँ, महिलाको दारी जुँगा पलाउनु, पुरुषको छातीमा अत्याधिक रौँलाई हटाउन वा मिलाउन सकिन्छ ।
नेपालमा लेजरका नयाँ नयाँ प्रविधिप र उपकरण भित्रिएका छन् । सामान्य रूपमा हेर्दा छालाको उपचार
केही महँगो मानिए पनि प्रविधि र उपकरणको सही प्रयोग भएमा समस्या समाधान पूर्णरूपमा हुन्छ । कतिपय स्थानमा उपकरण भएर पनि सही प्रयोग नहुँदा बिरामी थप समस्यामा पर्ने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । यसका लागि नागरिक आफू पनि सचेत हुन जरुरी हुन्छ ।
फरक फरक कामका लागि फरक फरक लेजरको प्रयोग हुन्छ । मुख्यतया लेजर दुई प्रकारका छन् एब्लेटिभ लेजर र नन–एब्लेटिभ लेजर ।
एब्लेटिभ लेजर यस्तो लेजर प्रविधि हो, जसले छालाको माथिल्लो सतहमा मात्रै काम गर्छ । अथवा शरीरमा घाउ बनाएर गरिने लेजर एब्लेटिभ हो । छालासम्बन्धी समस्याहरू जस्तो; कोठी हटाउन, मुसा, दाग, मखिया आदिमा यो लेजर प्रविधिको प्रयोग हुन्छ ।
यसले शरीरको भित्री भागमा जहाँ पानी छ उक्त पानी भएको सतहको बाहिरी भागमा काम गर्छ । हड्डी भएको ठाउँमा यो लजरको प्रभाव हुँदैन ।
एब्लेटिभ लेजर पनि दुई प्रकारका छन् ।
सीओटु लेजर छालाको भित्री तहसम्म पुगेर काम गर्छ । यसको वेब लेन्थ १० हजार ६ सय हुन्छ हाम्रो । छालामा दुईवटा पत्र हुन्छ । एउटा इटिडर्मिस (छालाको माथिल्लो तह) र अर्को डर्मिस (छालाको भित्री तह) ।
चोट पटकको खत, चाउरी, झोलिएको छाला, डन्डिफोरका खत, आदि डर्मिसमा पर्दछन् । डर्मिसमा भित्री तह ड्यामेज भएको हुन्छ । जसलाई सीओटु लेजर गर्नुपर्छ । भित्री छालाको भाग जसमा चोट पटक वा अन्य कारणले गर्दा असर गरेको हुन्छ । सीओटुले भित्री भागलाई रिमोडलिङ (भित्री रेशाहरूलाई कस्ने काम) गर्ने भएकाले डर्मिसमा सिओटु लेजर गरीन्छ ।
अर्वियम लेजर (Erbium)
अरविन लेजरले छालाको माथिल्लो सतहमा मात्रै काम गर्छ । यो लेजरका वेब लेन्थ २ हजार ९ सय ४० हुन्छ । इपिडर्मिसमा हुने समस्याहरूलाई अरविन लेजर गरिन्छ । जस्तो कोठी, मुसा, मखिया चाया आदि इपिडर्मिसमा पर्दछन् । अरविन लेजर (एलडीआर लेजर) प्रविधिले जति कालो भाग छ उति छिटो काम गर्छ ।
यसैगरी अर्को लेजर पनि हुन्छ त्यो हो पल्स डाइयोलेजर । प्रविधि रातो छाला र रातो खत वा कोठीमा प्रयोग गरिन्छ ।
नन एब्लेटिभ लेजर छालाको भित्री सतहमा काम गर्छ । जस्तो; हेयर रिमुभल लेजर नन एब्लेटिभ लेजरमा पर्छ । हेयर रिमुभल लेजरको प्रयोग गर्दा छालाको भित्री तहमा पुगी हिट उत्पादन गर्ने काम गर्छ ।
यो प्रविधिमा लेजर फायर गर्दा बाहिरी स्किनलाई असर नगरी रौँको जरामा गएर हिट गर्नेहुन्छ । काम जसले रौँको जरालाई ड्यामेज गरिदिन्छ र फेरि फेरि पलाउन पाउँदैन ।
हेयर रिमुभल लेजर प्रविधिको काम कालो चिजलाई नास गर्ने हो । हेयर रिमुभ गर्दा पनि छालाको तहमा रहेको कालो रौँको जरालाई नास गरिदिन्छ । हेयर रिमुभल लेजरले खैरो अथवा सेतो रौँमा काम गर्दैन तर कालो रौँमा भने राम्रो काम गर्छ ।
तपाईं हेयर रिमुभका लागि लेजर प्रविधिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने यो जान्नुपर्छ कि ख रौँमा यो लेजरको असर न्यून मात्रै हुन्छ ।
के लेजरको साइड इफेक्ट हुन्छ ?
लेजरको साइड इफेक्ट हुन्छ कि हुन्न भन्नेबारे धेरै अनभिज्ञ छन् । सामान्य रूपमा बुझ्दा साइड इफेक्ट प्रविधि, मेसिन, डाक्टर अनि बिरामीमा भर पर्ने कुरा होे । प्रविधिको प्रयोग सही तरिकाले भएको छ भने परिणाम राम्रो आउँछ ।
नेपालमा भित्रिएका सबै लेजर उत्कृष्ट छन् भन्ने छैन । हाल लेजर गर्ने ट्रेन्ड चलेको छ । तर ट्रेन्डको पछि लाग्नभन्दा पनि समस्याको सही पहिचान गरी डाक्टरको सल्लाहअनुसार गर्दा परिणाम राम्रो आउँछ ।
धेरै व्यक्ति लेजर गर्ने भन्दै हस्पिटल तथा क्लिनिक पुग्छन् । तर सीधै लेजरको सल्लाह दिनु गलत हो । सबैभन्दा पहिले त समस्याको पहिचान गरी लेजर गर्दा परिणाम आउँछ कि आउँदैन र अन्य समस्या छ कि छैन विचार गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ ।
लेजर गर्नुपूर्व कुनै पनि समस्या किन आयो भन्नेबारे जान्नु जरुरी हुन्छ । समस्याको पहिचान समाधानका लागि अन्य उपाय (उपचार) गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । उपचारपछि मात्र लेजरमा जानुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ नयाँ प्रविधिसँग लेजर टेक्निसियनलाई अपडेट गराउनका लागि लेजर कम्पनीहरूले प्रविधिबारे तालिम नै दिनेगर्छ । त्यसैले तालिम प्राप्त र वैधानिक स्थानमा गएर चेकजाँच गर्दा भोलि पछुताउनबाट जोगिन सकिन्छ ।
लेजर गरिसकेपछि सामान्यत छाला रातो हुने र यो रातो एक दुई दिन रहन सक्छ । त्यसबारे आफू प्रष्ट हुनुपर्छ र केही दिनमा यो सामान्य अवस्थामा आउँछ । नन–एब्लेटिभ लेजर गर्दा केही समय छाला रातो हुन्छ । त्यसपछि सामान्य अवस्थामा आउँछ । एब्लेटिभ लेजर गर्दा घाउ बनाउन पर्ने पनि भएकाले केही दिनमा सामान्य अवस्थामा आउँछ ।
कसरी गरिन्छ लेजर
लेजर गर्नुपूर्व समस्याको पहिचार गर्नुपर्छ । लगभग ३ हप्ता अघिबाट छालालाई तयार पार्नुपर्छ । जस्तो; छालालाई घामबाट जोगाउने, क्रिमको प्रयोगरी छालालाई लेजरका लागि तयार पारिन्छ ।
त्यसैगरी, लेजर गर्नुपूर्व ल्याव (रतगको टेस्ट जाँच) गरिन्छ । यदि अन्य कारणले छालामा समस्या आएको हो भने अन्य उपचारका लागि सिफारिस गरिन्छ ।
हेयर रिमुभल लेजरमा सबैभन्दा पहिले सेभिङ गरिन्छ । हेयर सेभिङ नगरी गर्दा लेजरले करौँलाई बाहिरै ड्यामेज गरिदिने भएकाले बाहिरी भागमा रौँ हुनुहुँदैन ।
कुनै घाउ खटिरा छ भने पनि लेजर गर्नु हुँदैन । लेजर लाइटले छालामा जानासाथ असर गर्ने भएकाले संवेदनशील अङ्गमा लेजर गर्नुपूर्व सावधानी अपनाउनुपर्छ । संवेदनशील अङ्गको वरिपरि गर्दा निकै होसियारीपूर्वक गर्नुपर्छ ।
कति पटकसम्म गर्नुपर्छ लेजर
लेजर कतिपटकसम्म गर्ने भन्नेबारे समस्या र प्रविधिमा भर पर्छ । कतिलाई अलि धेरै पटक लेज गरेपछि मात्र समस्या समाधान हुन्छ । मेसिन र समस्या हेरी समय निर्धारण गर्न सकिन्छ ।
विभिन्न कम्पनीका लेजरहरू नेपालमा भित्रिएका छन् । जस्तो; डायोड लेजर अलि महँगो र भरपर्दो भनिएको छ । यो लेजर ६ देखि ८ पटकसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले अन्यको तुलनामा प्रभावकारी र छिटो परिणाम दिन्छ ।
अर्को होलङ पल्स लेजर । यो १२ देखि १५ पटकसम्म गरिरहनुपर्छ । यो डायोड लेजरभन्दा अलि सस्तो हुन्छ तर ढिलो प्रभाव देखाउँछ ।
अर्को हो आईपीएल लेजर । जुन २० पटकसम्म पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यको तुलनामा केही सस्तो र ढिलो प्रभाव देखाउने लेजरमा पर्छ ।
कतिपयको सोचाइ लेजर गरेपछि समस्या पुनः आउँदैन भन्ने छ तर त्यो होइन । यदि हेयर रिमुभ लेजर गरेको छ भने लेजर गरेको रौँ आउँदैन तर अन्यत्रबाट रौँ पलाइरहेको हुन्छ र पुनः लेजर गरिन्छ । यो प्रक्रिया केही पटक चलिसकेपछि बल्ल रौँ आउने क्रम बन्द हुन्छ ।
हाम्रो शरीरको भिन्न भागमा भिन्न तरिकाले रौँ आउने भएकाले त्यसलाई कम गर्न बेलाबेला टच गर्नुपर्ने हुन्छ । केही वर्षसम्म समय समयमा लेजर गरिराख्ने हो भने यो निर्मूल नै हुन्छ ।
June 26, 2019, 6:39 a.m. Roma acharya
Balyakaalma chickenpox aayeko huda teshko khaldo face ma basya xa k yeshlie remove garna sakiyela
June 24, 2019, 1:34 a.m. Kedar
Mero face Maaa dandifor bigrera khalto pareko xa ra halka kalo daag ni xa yo laser mero samasya sabdan hunxa.ki hudaina hola adi hunxa vane kati din ra kati paisa lagxa hola pura jankari dinu hola Haal saudi bata please kindly provide clear information thank you waiting for your reply
June 23, 2019, 8:48 p.m. तुलसा पोखरेल
मेरो अनुहार को लेजर गर्नु पर्ने सर ?यो गर्न धुलिखेल नै आउनु पर्ने होकि क होला ?नम्बर पाउन सके नि हुन्थ्यो अनि कति दिन हस्पिटल बस्नु पर्छ र?